Umhlaba ophuzi, umkhiqizo omuhle wokufundisa wokuhlolwa kwegazi | Izincwadi Zamanje
Ukucaphuna kuka-Albert Espinosa.
Ngo-2008 umbhali waseSpain u-Albert Espinosa washicilela Umhlaba ophuzi, incwadi athe umbhali uqobo ayizisizi. Kuwubufakazi obude mayelana nokuhlangenwe nakho okunzima nokufunda okubangelwe yiminyaka eyishumi yokulwa nomdlavuza. Ngale ndlela, umbhali wakha ukulandisa lapho akhomba khona "abanye abaphuzi", ngesitayela esisondele futhi esimnandi kakhulu kumfundi.
Ngakho-ke, umqondo wokuphila ophuzi ngokuphelele, ekuqaleni, uyinto ethize ehlaba umxhwele. Ngisho, kungani lowo mbala othile? Noma kunjalo, U-Espinosa udalula umbono okwazi ukwephula izinhlamba zendabuko zalesi sifo. Lapho - ngaphandle kokudlula kobukhona bomuntu - kubalulekile ukuzicwilisa okwamanje, ngaphandle kokwesaba ukufa.
1 Mayelana nomlobi, u-Albert Espinosa
1.1 Isimo sengqondo lapho ubhekene nobunzima
1.2 Ukuqala kobuciko
1.2.1 Indawo yaseshashalazini
1.2.2 Ifilimu nethelevishini
1.3 Isici semibhalo sempilo yakho
2 Ukuhlaziywa komsebenzi
2.1 Kungani Umhlaba Ophuzi? (Isizathu esikhulu)
2.2 Isimemo sombhali kubafundi bakhe
2.3 Konke kungokwesikhashana, ngisho nokugula
2.3.1 Ukuba semthethweni kwencwadi
3 Isifinyezo sencwadi
3.1 Intando akuxoxiswana ngayo
Mayelana nomlobi, u-Albert Espinosa
Lo mbhali wemibhalo yesinema, umbhali wezingcezu ezimangazayo, umlingisi nombhali wamanoveli waseSpain, wazalelwa eBarcelona ngoNovemba 5, 1973. Yize ayeqeqeshwe njengonjiniyela wezimboni, wanikela ngempilo yakhe kwezobuciko, ethola udumo oluningi kumabhayisikobho nasesiteji..
Isimo sengqondo lapho ubhekene nobunzima
Impilo ka-Espinosa yashintsha kakhulu ngemuva kokutholakala kwe-osteosarcoma emlenzeni owodwa eneminyaka engu-13. Lesi simo samthinta isikhathi esingaphezudlwana kweshumi, yize kunjalo, wangena ePolytechnic University of Catalonia eneminyaka engu-19. Khonamanjalo - ngenxa yomdlavuza we-metastases - wahlulwa ukunqunywa umlenze kanye nokususwa kwephaphu nengxenye yesibindi.
Izimo zezempilo zika-Espinosa kamuva zasebenza njengesisusa sokwakha izingcezu zemibhalo yaseshashalazini noma ithelevishini.. Futhi, ngenkathi enza izifundo zobunjiniyela (esalwa nomdlavuza), wayeyilungu leqembu lezeshashalazi. Ngakho-ke, kuza izinkulumo zakhe zokuqala njengomlobi, ezikhuthazwe yimpilo yakhe ngaphezu kwakho konke.
Ekuqaleni, u-Espinosa wabhala imibhalo yaseshashalazini. Kamuva, wabamba iqhaza njengomdlali ku- AmaPelones, isiqephu esimangazayo sokubhala kwakhe esikhuthazwe yisipiliyoni sakhe ngomdlavuza. Ngendlela efanayo, leso sihloko sasebenza njengegama lenkampani yaseshashalazini ayisungula kanye nabangane bakhe.
Eminyakeni engama-24, waqala indlela yakhe kuthelevishini, ikakhulukazi njengomuntu okhululekayo ezinhlelweni ezahlukahlukene. Isigamu seminyaka eyishumi kamuva, umbhali waseCatalan ukwazile ukwaziwa lapho egcwalisa umsebenzi wombhali wefilimu Isitezi sesine (2003). Ukusuka kule filimu, u-Espinosa wazisungula esikrinini esikhulu futhi wathola imiklomelo njengombhali weshashalazi nombhali wemidlalo yaseshashalazini phakathi neminyaka elandelayo.
Isici semibhalo sempilo yakho
Maphakathi no-2000s, u-Albert Espinosa wayesevele eqashelwa ezweni lobuciko laseSpain ngenxa yemidlalo yakhe yaseshashalazini, ithelevishini kanye ne-cinematographic, kepha wayefuna okunye. Ngemuva kwalokho, ngo-2008 wakhipha inoveli yakhe yokuqala, Umhlaba ophuzi. Eminyakeni elandelayo akayekile ukushicilela izincwadi, phakathi kwayo, phuma:
Uma ungitshela, woza, ngizokushiya konke ... kodwa ngitshele, woza (2011)
Izwe eliluhlaza okwesibhakabhaka: thanda isiphithiphithi sakho (2015)
Uma besifundisa ukwehlulwa besiyohlale siwina (2020)
Kungani Umhlaba ophuzi? (Isizathu esikhulu)
Le ncwadi ivame ukuhlukaniswa njenge- ukuzisiza ngenxa yomyalezo omenyezelwe embhalweni. Njengoba ingqikithi yombhalo igxile kunani lobungani, ukuhlala esikhathini samanje, ukubona uhlangothi oluhle lwento ngayinye, noma ngabe isimo singase sidwebe kangakanani ... Ukwenza lokhu, Amehlo, ngokombono osondelene kakhulu, ukwakha indlela yokuqala yokuphila nokuqondana ubukhona bomunye nomunye.
Ngakho-ke, akuyona indaba ebuhlungu (njengoba umuntu angacabanga ngesiguli somdlavuza), ngoba impikiswano igxile entandweni yokuthuthukisa umuntu ngamunye. Ngaleyo ndlela, Amehlo ukwazile ukukhombisa uhlangothi oluhle lokuhlangenwe nakho kwakhe — yize kungenzima kangako— ngaphandle kokusebenzisa imihlobiso ephazamisa ubuqiniso bendaba.
Umhlaba Ophuzi: Yebo ...
Isimemo sombhali kubafundi bakhe
Ekupheleni kokulandisa, umbukeli ubuzwa lo mbuzo olandelayo: ngabe ufuna ukushintsha uphuzi? Yize kufanele kucaciswe lokho "okuphuzi" kungaphezu kwesimo sengqondo esishwa. Empeleni lowo mbala Iphinde imele indawo efudumele, ekhanyayo, lapho konke ukubuyela emuva kuyithuba lokufunda, khula futhi uthuthuke ngamandla athe xaxa.
Konke kungokwesikhashana, ngisho nokugula
Ukugula kufanekisela isimo esingahlali unomphela (njengezinto eziningi nabantu abasempilweni). Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi ungayinaki imiphumela yesimo sempilo esinzima kakhulu, ingasaphathwa eyokubeka ilebuli "yesikhashana" kuyo yonke into.. Kufanele kukhunjulwe ukuthi i-protagonist yendaba ilahlekelwa yingxenye yesitho somzimba ngisho nezitho ezithile.
Ukuba semthethweni kwencwadi
Ama-2020 azongena emlandweni njengokukhanya kokuvela kweCovid-19. Lo bhubhane lomhlaba wonke lungathathwa njengesikhumbuzo esintwini: Kufanele ukwazise okukhona manje futhi ubonise uthando kwabathandekayo. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukungawunaki umbono ka-Espinosa ezindabeni eziphathelene nobudlelwano babantu ku Umhlaba ophuzi.
U-Albert Espinosa unquma ukuvuselela umbono wakhe womhlaba kusukela lapho kuchazwa isimo sakhe sempilo. Ngakho-ke, isiphakamiso sokwakha umhlaba wonke awubiza ngokuthi uphuzi. Ngokulandelana, umbalisi uchaza kabusha izinkolelo zakhe nendlela elandelwe kuze kube yileso sikhathi.
Ngaleso sikhathi, lapho i-protagonist ikwazi ukuzibona ngamandla ayo nobuthakathaka bayo, ingaguqula umbono wayo wendawo yonke. Ngaphezu kwalokho, umphumela walokho kuziphendukela kwemvelo kubangelwe ngaphakathi komuntu kuvuthondaba ngokuqonda kokutholwa kwe-neuralgic okungama-23. Nazi ezimbalwa:
Kuyadingeka ukushintsha umbono ukuze uqonde imibuzo engakacaciswa kuze kube yileso sikhathi
Kuhlale kunokwenzeka ukukhulisa okuhle kwesimo esingenakugwemeka
"Zizwe uthukuthele" njengendlela yokuzihlola ngokwakho
Igama elithi ubuhlungu alikho
Intando akuxoxiswana ngayo
Umzimba wombhalo ubuswa ukulandisa komlando womuntu okwazi ukubhala izikhalazo zakhe noma ukungakhombisi ukudabuka ngenkathi echaza isimo sakhe. Ngakho-ke, Esinye isambulo esibalulekile isimilo esingaxoxiswanga sokuqinisa intando. Ekugcineni, u-Espinosa uchaza ukuthi kuphela ngokubhekana nomdlavuza lapho akwazi khona ukwenza lokho okutholakele kubekwe phansi.
Ngokwengeziwe, umbhali waseSpain ubhekisa kwabaphuzi njengabantu abamakiwe abasiza ukwazi amamaki omuntu ngamunye ozihlanganisa nabo. Ekugcineni, umbhalo awunakho ukuvalwa kanjalo. Kuleyo ngxenye yokugcina, umbalisi uhlongoza abafundi bakhe isiqalo esisha empilweni, ngaphandle kwamalebula, ngesifiso esingapheli sokuphila.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Izindaba » Umhlaba ophuzi